Warshad PDT LED PHOTOTHERAPY - Shiinaha PDT LED PHOTOTHERAPY Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Blue Cool Light LED Laydhka Ilkaha Ilkaha Mashiinka Mashiinka T6
Iftiinka buluugga ah ee qabow wuxuu dhaqaajiyaa jilaalka caddeeya wuxuuna qiijiyaa midabka ilkaha iyada oo loo marayo tuubbooyin dentin ah waqtiga ugu yar, iyadoo laga beddelayo ilkaha midab cadcad dibedda iyo gudaha.
Xirfadlayaasha ilkaha laysku qurxiyo ee xirfadeed ee caddeeya T5
Ilka caddeynta waa hab fudud, hab muxaafid ah oo lagu wanaajinayo muuqaalka dhoolla caddeynta iyo yareynta midabka ilkaha.
dib-u-cusbooneysiinta maqaarka wajiga photodynamic ayaa horseeday laydhka noolaha ee daaweynta iftiinka L9
Dib-u-cusbooneysiinta maqaarka ee loo yaqaan 'LED Skin Rejuvenation' waa isdhexgalka iftiinka, oo lagu soo diro Diodes Lightmitation Diodes (LEDs), si loo kiciyo kuwa soo dhaweeya unugyada taasoo u keenta inay soo saaraan kolajka ama tarmaan.
Ilkaha Iftiinka Iftiinka Mashiinka Ilkaha Ilaalinta MC01
Iftiinka casriga ah ee xasaasiga ah Ilkaha caddeeya wuxuu u rogi karaa tamarta korantada iftiin buluug oo xoog leh.
5 Qaababka Photon LED light Photodynamic PDT Maqaarka Cusbooneysiinta L8
Qalabku wuxuu qaataa PDT (Photon Dynamic Technology). Waxaa jira 5 qaab oo loo yaqaan 'LED' si loo hagaajiyo xaaladda guud ee maqaarka.
Buugga Ilkaha Xannaanada Ilkaha 3d Tilmaamaha Ilkaha Ilkaha Hiddaha Huruca RT20
Tilmaamahaan quruxda badan ee '20 Shades Guide' ayaa kaa caawin doona inaad tusto bukaanadaada halka ay ku istaagayaan ilkahooda cadaanka waxayna cabirayaan horumarkooda inta ay ku gudajiraan howsha ilka caddeynta.
3d Ilkaha Cadaynta Tilmaanta Dheecaanka Neefta 27 Midabka CE Shahaadada RT27
Tilmaame-barahan 27 Shades Guide ayaa kaa caawin doona inaad tusto bukaankaaga halka ay ku taagan yihiin ilkahooda caddaan iyo cabbirayaan horumarkooda inta ay ku jiraan ilkaha caddeynta.
Kliinikada Isticmaal Laydhka Nalka Ilkaha ee Nadiifinta Mashiinka Laserteeth caddeeya T2
Ilkaha caddeynta Mashiinka la qaadan karo ee loogu talagalay isticmaalka guriga oo leh 24 awood leh oo LED ah T9
Nidaamka 30-ka daqiiqo wuxuu hubiyaa hagaajinta shan illaa afar iyo toban midab. Riyo maaha in ilkahaagu ka dhalaalaan nuur.
Tiknoolajiyad Cusub Muuqaal Casri ah 7color PDT Maqaarka oo L6A
Daraasaduhu waxay xaqiijinayaan in isla tamarta LED-ka loo isticmaali karo si looga hortago sameynta kolajka, taas oo caawin karta daaweynta nabarrada. Adoo adeegsanaya dhererka dhererka, unugyada way khayaami karaan oo dami karaan.